Atụmatụ nke ịgha mkpụrụ vaịn n'etiti etiti, na-atụ aro maka ndị na-amalite
Ikekwe na mpaghara oyi gị n'oge oyi na oge okpomọkụ na-emekarị ka akara ahụ dị na -20, ma nke a anaghị afụ ụfụ ịkụ ubi-vine na, n'ịgbaso ndụmọdụ anyị, na-eto eto ọma nke tomato. Mkpụrụ vaịn dị iche iche ka ọ na-eto eto maka ndị na-amalite n'èzí. N'ezie, mkpụrụ vaịn na-etolite n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ okpukpu okpukpu ọ bụla.
Olee otú iji gbochie ma na-alụ ọgụ pests nke mkpụrụ vaịn
Mkpụrụ vaịn, n'ozuzu, a na-ewere dị ka ihe siri ike ma dị mfe ịba n'ime osisi. Otú ọ dị, e nwere ụmụ ahụhụ na ọrịa ndị dị ize ndụ nye ya. Ya mere, ọ dị mkpa ịkwadebe tupu oge eruo maka nsogbu ndị nwere ike, maara nke ọma na pests ndị a maara nke ọma. Ị ma? Nchoputa ihe omumu nke ndi sayensi na-eme na-egosi na a na-ebelata ihe ubi nke ihe ubi n'ubi kwa afo site na otu uzo ato, ma oburu na ha adighi-eme ihe kwesiri iji gbochie oria, oria nwere ike iru okara nke ihe ubi.
Ọrịa mkpụrụ vaịn na-achịkwa ma na-achịkwa ha
Ọrịa nke mkpụrụ vaịn - nnukwu ihe ize ndụ nke a osisi. Ụdị kachasị ụtọ ma buru ibu na-anọgide na-adọrọ mmasị ha, n'agbanyeghị ọrụ nke ndị na-azụ anụ. Ya mere, iji nweta ezi owuwe ihe ubi, ọ dị mkpa ka ị mara otú e si emeso mkpụrụ vaịn maka ọrịa. Ị ma? Mkpụrụ vaịn - nanị osisi dị n'ụwa nke na-amụ ihe sayensị dị iche iche - ampelography.
Olee otu esi emeso mkpụrụ vaịn
Ọtụtụ ndị na-elekọta ubi na-ahụ mkpụrụ osisi vine n'anya ha. A nabatara ya maka uru bara uru ya na uto ya. Otú ọ dị, ihe ọkụkụ a nwere ike ịbụ ihe ize ndụ ma ọ bụrụ na pests na-emetụta osisi ahụ. Ọtụtụ mgbe a na-eme ka mkpụrụ vaịn wakpoo mkpụrụ vaịn, bụ nke a maara dị ka mite mkpụrụ vaịn. Mgbe nje, ị nwere ike ida ruo pasent 30 nke ihe ọkụkụ ahụ, ma ọ bụrụ na ị gaghị eme ọgwụgwọ oge, ị nwere ike ida na 50%.
Mkpụrụ ọka Berry dị ka mkpụrụ vaịn na-aghọwanye nke zuru ebe nile na ụlọ ndị na-ekpo ọkụ n'oge okpomọkụ. Ọtụtụ na-achọ ịlụlite okpokoro dị iche iche na teknụzụ maka ịmepụta onwe ha nke mmanya a na-eme n'ụlọ. Ma isiokwu a abụghị banyere nke a. Anyị ga-ekwu banyere otu esi akụ mkpụrụ vaịn na nsị nke seedlings na-enweghị enyemaka ọ bụla na mmiri.
Kedu ka esi eto mkpụrụ vaịn na Urals: kụrụ na ilekọta tomato na ọnọdụ oyi
Mmanya na-eto ogologo oge bụ ihe ùgwù nke mba ndịda. Eziokwu bụ na a na-ewere ọrụ ugbo a dị ka thermophilic. Mana ekele maka ọrụ nke ndị na-azụlite ihe ubi, ịkụ mkpụrụ vaịn na Urals, ịgha mkpụrụ na ịkọ ihe ghọrọ ezigbo. Ugbu a, viticulture abụghị nanị na emepụtara nke ọma na Urals, mana ọ na egosikwa ọnụ ọgụgụ dị elu.
Nchịkọta ihe ubi nke mkpụrụ vaịn vaịn: kụrụ ma lekọta
Kishmish bụ aha mkpokọta maka nnukwu mkpụrụ osisi vine dị iche iche, nke dị obere na nke ụtọ uto nke tomato, nakwa nke enweghị mkpụrụ n'ime ha. Oge a kwesiri iburu n'uche mgbe ị na-ahọrọ mkpụrụ vaịn nke mịrị maka akuku na saịtị ahụ, ebe ọ bụ na agrotechnical cultivation of grapes, the taste of its berries and characteristics of caring for the plant nwere ike ịdị iche iche dabere na iche iche.
Nso ọgwụ ọjọọ iji mee ihe n'ubi vaịn: fungicides maka mkpụrụ vaịn
Mgbe ị na-amị mkpụrụ vaịn n'ụlọ, a ghaghị icheta ya na ọ na-esikarị ike na ọrịa na pests na-atụle ụdị anụ ọhịa. Iji zere iji belata ogo na oke nke ngwaahịa a, a na-atụ aro ka ị na-emeso mkpụrụ vaịn na fungicides, nke ga-enye nchebe dị iche iche pụọ na nsogbu dị otú ahụ.
Mkpụrụ vaịn "Cabernet Sauvignon": àgwà na nkà na ụzụ ugbo nke ịkụ mkpụrụ
Cabernet mmanya maara nke ọma ma hụ ndị mmanya na-acha uhie uhie n'anya. Kpamkpuru mba nile ebe mmanye mmanya, site na oyi Canada ka ha rute Lebanon, na-etoputa otu osisi vine na-achoghi oke ohia na-acha acha anwuru-acha. Kaadị Cabernet na-emepụta Italy na Spain, Ukraine na Moldova, Chile na Argentina, nakwa South Africa, Australia na United States nke America.
Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi esi mmiri ma zụọ mkpụrụ vaịn na mmiri. Ọtụtụ ndị nwe ụlọ na-arụ ọrụ na-amị mkpụrụ vaịn ruo ọtụtụ iri afọ, otu nlekọta nke osisi vaịn ahụ maara. Otú ọ dị, ọnọdụ ihu igwe na-agbanwe agbanwe, ọnọdụ ihu igwe na enweghị enweghị ihe oriri na-eme ka mkpụrụ osisi na mkpụrụedemede "award" mkpụrụ vaịn nwere ọrịa dị iche iche.
Kedu esi egbutu mkpụrụ vaịn site na Ome na-enweghị isi n'oge okpomọkụ
N'oge okpomọkụ ịchacha mkpụrụ vaịn bụ akụkụ dị mkpa nke ilekọta osisi a. Ọ dị mkpa karịsịa maka mpaghara ndị ebe okpomọkụ dị mkpụmkpụ ma mkpụrụ vaịn adịghị enweta ìhè anyanwụ nke ọma maka ịkọchapụta ezigbo ọkụ. Ọ ga-ekwe omume ịkwanye mkpụrụ vaịn n'oge okpomọkụ? Ihe a na-apụghị ịgbagha agbagha nke ịchacha mkpụrụ vaịn n'oge okpomọkụ bụ na usoro a na-enyere aka ibuli nnukwu ihe ma melite ogo nke akuku.
Esi mee ka mmanya si na vaịn: ihe nzuzo nke winemaking ụlọ
Taa, e nwere ọtụtụ ụdị mmanya dị iche iche na tomato. Ma, ihe kachasị ewu ewu bụ mmanya vaịn. Anyị ga-atụle ụdị mkpụrụ vaịn ịhọrọ na otu esi emepụta ihe ọṅụṅụ dị ụtọ na ya n'isiokwu a. Mkpụrụ vaịn dịgasị iche iche ka ịhọrọ N'ihi na ị na-eme mmanya site na mkpụrụ vaịn n'ụlọ, ị nwere ike ịhọrọ oke ụdị osisi a.
Otú e si emeso oidium na mkpụrụ vaịn
Mkpụrụ vaịn, dị ka osisi ndị ọzọ a kụrụ n'ubi, nwere ike inwe ọrịa dị iche iche. Ha na-agba akwụkwọ, inflorescences, si otú ahụ merụọ osisi ahụ. Oidium (aha ọzọ bụ powdery mildew) bụ otu ọrịa dị otú ahụ. N'isiokwu a, anyị ga-atụle oidium na mkpụrụ vaịn: tụlee ịgwọ ọrịa a, yana kwurịta ụzọ kasị mma isi jikwa osisi ahụ.
Ịkụ mkpụrụ ma na-elekọta mkpụrụ vaịn "Memory Dombkovskaya" na mba ahụ
Mkpụrụ vaịn - mkpụrụ osisi nke ezinụlọ Vinogradovye, nke nwere ihe karịrị ụdị 70, na-eto eto maka akụkụ kachasị elu na ọnọdụ elu. Dịgasị iche iche "Nchekwa Dombkovskoy" dị iche iche obi ụtọ uto nke mkpụrụ na ọgaranya agba nke tomato. Akụkọ banyere nhọpụta nke mkpụrụ vaịn "Na ebe nchekwa nke Dombkovskaya" bụ onye na-anụ ọkụ n'obi si Orenburg Shatilov Fyodor Ilyich n'ihe dị ka afọ iri atọ gara aga.
Kedu ezigbo mkpụrụ vaịn "Julian" na otu esi elekọta ya
N'oge na-adịbeghị anya, mkpụrụ vaịn bụ "Julian" na-enweta nnukwu ewu ewu n'ihi àgwà ya, na osisi shrub nke onwe ya dịgasị iche iche bụ mpako nke onye ọ bụla na-akwa nri. N'isiokwu a, anyị ga-amacha mkpụrụ vaịn "Julian" - nkọwa na usoro nlekọta maka iche iche, foto. History Nke a dịgasị iche iche e bred site na onye na-amu amu breeder V.
Ekwesịrị m ilekọta mkpụrụ vaịn n'oge okooko?
Oge nke na-ekpebi ogo nke owuwe ihe ubi na-esote bụ okooko nke mkpụrụ vaịn. Ọ dị ezigbo mkpa iji zere nsogbu na oge nke omenala. Ma ọ bụrụ na enweghi ike imetụta ọnọdụ ihu igwe, mgbe ahụ, ọ dị oké mkpa ime ihe dabere na aka nke onye na-akwa ákwà. Nkọwa na atụmatụ nke oge Mgbe mkpụrụ vaịn nọ na oge ntoju, ọnọdụ okpomọkụ, ogo iru mmiri, yana nlekọta nke ubi maka ọdịbendị dị oké mkpa.
Atụmatụ na-eto eto na àgwà nke Buffet grape
Na mmalite nke mgbụsị akwụkwọ, mkpụrụ vaịn na-egosi na shelves nke ụlọ ahịa na ahịa. Anyị niile na-atụ anya n'oge a mgbe ị nwere ike zuru oke ụtọ ụtọ uto na ọgaranya okpukpo ndị a kemmiri ihe tomato. Ha na-atọ anyị ụtọ ụdị dịgasị iche iche ha na ụdị ha, nke na-eme ka nhọrọ nke ndị na-azụ ahịa gbasaa nke ukwuu, ma, ọ na-enwe nhọrọ siri ike nye ndị na-ekpebi ịmalite mkpụrụ osisi a n'ubi ha.
Ọtụtụ mgbe, ndị na-elekọta ubi chọrọ ịgbanwe mkpụrụ vaịn na-eto eto na saịtị ahụ, mana ha achọghị ịla oge ịgha ọhia. N'okwu a, jiri usoro ịgba ọgwụ mgbochi ahụ, nke anyị na-akọwa n'ụzọ zuru ezu n'isiokwu anyị. Ntak ịkụ mkpụrụ vaịn tupu ịmalite ịkọwa usoro ahụ n'onwe ya, ọ dị mkpa ịghọta ihe mere o ji dị mkpa.
Pinot noir mmanya na mkpụrụ vaịn
Taa, anyị ga-ekwu maka ụdị mkpụrụ vaịn dị mma "Pinot Noir", nke a na-eji mee ka mmanya dị ụtọ. Ị ga-amụta ebe a na-akọ ubi vaịn, ihe mmanya dị mkpa maka ya, lee ka o si sie ike ịmalite ịmalite dị iche iche na saịtị gị. Kwuo isi ihe nke ịgha mkpụrụ na ilekọta ubi vaịn.
Muscat mkpụrụ vaịn "Tason": ma ịnyefe ebe ke ubi-vine?
Taa, ọnụ ọgụgụ buru ibu dị iche iche dị iche iche. Otu n'ime ha bụ nutmeg, nke kacha mma mmanyagrowers hụrụ n'anya. Nke a bụ nchịkọta nke iche iche, nke tomato nwere ihe siri ike, dị nso na musk. A na-eji Muscat mee mmanya kacha mma na-acha ọcha, nwa na pink tomato.